Eritrea Oo Farriin Ay Ku Gudbineyso Cududeeda Ciidan Soo Bandhigtay | Himilo Media Group
Eritrea Oo Farriin Ay Ku Gudbineyso Cududeeda Ciidan Soo Bandhigtay
Dabbaaldegga sanad guurada 25-aad ee ka soo wareegtay sanadkii ay Eritrea madaxbannaanida ka qaadatay Itoobiya ayaa mudda toddobaad ah ka socotay dalkaasi.
Waxayna Eritrea munaasibadda ku soo bandhigtay dhoolatus ciidan oo ka duwan kuwii ay ku soo bandhigi jirtay munaasibadaha noocan ah.
Madaxweyne Isayaas Afawarqi oo munaasibadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay shaqada qaran ee ay ciidammadu iyo shacabku ka qayb qaadanayeen 25-ka sano iney horumarka dalka qayb weyn ka qaadatay.
Howsha Qaran uu muwaadin kasta oo Eritrea uu qabanayo oo ah mid laba sano qof walba laga rabo, haddana dadka dhalleeceeya waxay sheegayaan inuu sharciga uu dhigayo muwaaddin kasta oo ay da’diisu gaadho 18 sano inuu laba sana oo shaqo qaran ama ciidan uu soo maro, balse dadka qaar ayaa in 10-ka sano ka badan shaqeynayey.
Labad dal waa Itoobiya iyo Eritrea oo ay in mudda ah u dhaxeysay collaad ka dhalatay sheegashada dhul ayaa dhawaan heshiis kala saxeexday inkasta oo aan arrinta dhulka ee la isku haystay xal waara laga gaadhin.
Haddaba, Munaasibadda toddobaadka xorriyadda ee dalkaasi oo lagu qabtay magaalada Saawa waxay xukuumadda Asmara ay ku soo bandhigtay cudud ciidan.
Ciidamada dalladda ku boodana waxay halkaasi ku soo bandhigeen iyaga oo diyaaradaha xadhig kaga boodaya iyadoo ay diyaaradaha dagaalkana dul heehaabayeen halka uu dabbaaldegu uu ka socday.
Dadka qaar ayaa isweydiiyey xilliyadii ay Itoobiya collaadda kala dhaxeysay iney ciidan soo bandhigto layaab mallahayn, laakiin hadda oo ay Itoobiya heshiiyeen sababta looga baahday Eritrea iney cududdeeda ciidan ay soo bandhigto.